Real Power Body Fitness Center, ရန်ကုန် — လိပ်စာ
Real Power Body Fitness Center, ရန်ကုန်	လိပ်စာ, လမ်းညွန် နှင့် တည်နေရာ
The One Fitness Studio	372 မီတာ။ Mr. Aung Khaing Win Body Fitness Center	536 မီတာ။ Pro-Fit Gym	1.09 ကီလိုမီတာ PRO. FIT GYM	1.11 ကီလိုမီတာ ဆရာေအာင္ခိုင္ဝင္း Gym	1.19 ကီလိုမီတာ ကန်တော်ကြီးရေကန်	1.28 ကီလိုမီတာ Esperado Gym	1.38 ကီလိုမီတာ Thuwanna Bhumi Event Park	1.53 ကီလိုမီတာ Senso	1.57 ကီလိုမီတာ Phoenix Myanmar Boxing Club	1.64 ကီလိုမီတာ
ပဲခူးမြို့	65.29 ကီလိုမီတာ ဟင်္သာတ	121.15 ကီလိုမီတာ သထုံ	127.51 ကီလိုမီတာ ပုသိမ်	153.15 ကီလိုမီတာ မော်လမြိုင်	161.31 ကီလိုမီတာ တောင်ငူ	239.02 ကီလိုမီတာ ပြည်	246.2 ကီလိုမီတာ ထားဝယ်	372.79 ကီလိုမီတာ ရေနံချောင်း	428.36 ကီလိုမီတာ Meiktila	454.04 ကီလိုမီတာ
Real Power Body Fitness Center မှာတည်ရှိပါတယ် — ကျားကွက်သစ်လမ်း, ရန်ကုန်.
ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ကုမ္ပဏီ၏အလုပ်ချိန်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေကြသည်.